Canada Myanmar: May 2008
တွေဟာသဘောတူသည်ဖြစ်စေမတူသည်ဖြစ်စေလက်ခံသည်ဖြစ်စေမခံသည်ဖြစ်စေ နေရာတိုင်းမှာဆက်လက်ရှင်သန်နေကြမှာပါ ဘယ်သူကို့ ဘယ်သူကမှပိတ်ထား၍မရ
ကြပါလမ်းကျဉ်းကလေးထဲမှာရှေ့ကရောက်နှင့်နေပြီးသားကားကလမ်းဖယ်မပေးရင် နောက်ကားကကျော်တက်လို့ မရခဲ့ ပေမဲ့ ဟိုက်ဝေးလမ်းမကျယ်ကြီးထဲ ရောက်သွား
ကြတဲ့ အခါမှာတော့တကားကိုတကားပိတ်မောင်းလို့ မရတော့ ပါဘူး ။
အဲ ဒါပေမဲ့ အရေးအကြီးဆုံးအချက်တခုကတော့တရားမျှတစွာ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ခွင့် 
လိုပ်ကိုင်နိုင်ခွင့် ရှိဖို့ ပါ ၊အပြန်အလှန်တန်းတူလေးစားဆက်ဆံခြင်း ဆိုတာလည်း
လူဆိုတာလူ့ အတ္ထနည်းအများမကင်းကြပါဘူး လူကိုလိုအပ်တဲ့ အခါမှာထိမ်းချုပ်
တဲ့ စံနစ်တခု သို့ မဟုတ် ဥပဒေ တခုခိုင်မာစွာလွမ်းမိုးရပ်တည်ထားဖို့ တော့ လို
ပါတယ် ဘယ်စံနစ်ဘယ်ဝါဒ ဘယ်လောက်ပဲကောင်းနေစေကာမူ လူသဘောသ
ဘာဝ ကိုထည့် မတွက်ထားခဲ့ ဘူးဆိုရင်ဖြည်းဖြည်းခြင်းပျက်စီးဆုံးရှံးတိမ်မြုတ်
လနဲ့ မိမိအောင်နိုင်ပြီးကာလနေရာရပြီကာလ မတူတပ်ကြပါဘူး အမျိုးသားရေးစိတ်ဓါတ်အစစ်အမှန်တွေဟာ မိမိ
တိုင်းပြည်တကယ်ကောင်းစားတိုးတက်မယ်ဆိုရင် မိမိနောက်မှာနေရရင်၊ နောက်ဆုတ်ပေးလိုက်ရရင်လဲ ၀န်မ
လေးတပ်ကြသလို ၊ လိုအပ်ရင်လဲ စွန့် လွတ်အသက်စတေးဖို့ ကိုပင်ဝန်မလေးတပ်ကြကြောင်းတွေ့ ရကြမှာပါ၊
ဘယ်နေရာကီစ္စမျိုးမှာမဆိုသဘောထားတင်းမာသူတွေနဲ့ သဘောထားပျော့ ပြောင်းသူ တွေဆို ပြီးနှစ်မျိုး (နှစ်အုပ်စုမဟုတ်ပါ )ရှိနေတယ်ကြတာလဲအဆန်းတကျယ်မဟုတ်ကြတော့ပါဘူး တော်လှန်ရေးတစ်ရပ်
ဆိုတာ ဒေါသရှေ့ ထားဂလဲ့ စားချေခြင်းတစ်ရပ်မဟုတ်ပါဘူး လိုအပ်လို့ အပြေင်းအလွဲ တစ်ရပ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း မျှသာဖြစ်ပါတယ် ၊နိုင်ငံရေးတရပ်မှာလည်းပါတီစွဲ ၊လူမျိုးစွဲပြင်းထန်လွန်းရင် အမျိုးသားနိုင်ငံရေးပျောက်ဆုံးတပ်
ပြီးလမ်းမှားရောက်တပ်တာတွေလည်းရှိတယ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ သမိုင်းတွေကိုပြန်ကြည့် မယ်ဆိုရင်လည်းတော်လှန်
ရေးတိုင်းမှာသွေး ၊ချွေး ၊အသက်တွေစတေးခဲ့ ကြရတာကို တွေရမှာဖြစ်ပါတယ် ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့
အခြားအရှေ့ အလယ်ပိုင်းလုပ်ရှားမှူတွေ ၊ အာဖရိက ကလုပ်ရှားမှူတွေနဲ့ ရှင်ရင် ပျော့ ပြောင်းညင်သာတာကိုတွေ့ 
ရပါတယ်။ နှစ်ပေါင်း ၄၀ ကျော်ကြာ ကြောက်ရွံ့ မှူအရိုးစဲနေတော့့လက်နက်မဲ့ အခြေအနေမပေးတာတွေလဲ ပါ
နေပါတယ်၊ ဒါတွေဟာစစ်အစိုးရအခွင့် ကောင်းရပြီးသက်ဆိုးရှည်နေခြင်းရဲ့ အဓိကအချက်ဖြစ်ပါတယ်။ UN တပ်
တွေ ၊ ဘာ တွေဆိုတာလဲ ဘယ်လို့ မှဝင်ဖို့ အခြေအနေဖြစ်မလာတော့ ပါဘူး။
သမိုင်းမှာကျွန်ုပ်တို့ ဟိုဖက်ဒီဖက်အားလုံး လေးစားခဲ့ ကြရတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ အဖွဲ့ ဟာအ
င်္ဂလိပ်ကိုတိုက်ထုတ်ဖို့ ဂျပန်ကိုခေါ်လာခဲ့ တာဘယ်သူငြင်းမလဲ့ ဒီဆိုးကျိုးကောင်းကြိုးတွေကို သူတို့ ဟိုင်နန်ကျွန်း
မှာဂျပန်ဖက်စစ်တွေနဲ့ စစ်ပညာသင်ကြားနေစဉ် ကြိုတင်ခန့် မှန်းသိရှိခဲ့ ကြပါတယ်၊ သိုတို့ လဲ့ ဖြစ်နိုင်ရင်ဘယ်သူ့
အကူအညီမှမပါပဲ ပြည်သူတွေနဲ့ ဝေးရာနယ်မြေမှာ အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်ကိုအမှန့် ကြိတ်ချင်ခဲ့တဲ့ သူတွေပါပဲ
တိုင်းပြည်တိုင်းမှာစစ်တပ်လိုပါတယ် ၊ဒါပေမဲ့ စစ်တပ်ရဲ့ အခန်းကန်ဏ္ဍဟာအကန့်အသတ်ဥပဒေ
ဘောင်ရဲ့ အောက်မှာလုံးဝရှိသင့် ပါတယ် ၊စစ်တပ်ဟာတိုင်းပြည်ကိုရွေချပေးနိုင်ရင်တောင်မှလုံးဝ အစိုးရမဖြစ်သင့်
ပါဘူး ယနေ့ ကမ္ဘာလူမှူအသိုင်းအ၀ိုင်းဟာ ကမ္ဘာစစ် ဖြစ်ခဲ့ ကြတဲ့ ကာလကြီးတွေနဲ့ မတူကြတော့ တာပြေင်းလွဲ
နေတာတွေ့ မြင်သတိထားမိဖို့ လိုပါတယ် ။ တရုပ်လို ၊ ရုရှနိုင်ငံလို နိုင်ငံတွေရဲ့ လူအင်အားနဲ့ အုပ်ချုပ်မှူစနစ်တွေ
ကို မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ နိုင်းယဉ်လို့ မရပါဘူး ...
တရုတ်ဟာလူဦးရေအဆမတန်များလွန်းပြီး ရှားပါးဆင်းရဲတဲ့ နိုင်ငံဘ၀ဟာ လူတဦးချင်းစီရဲ့ 
ကျိုးစားမှူအရည်အချင်းတွေကို တန်းအားပေးခဲ့ ပါတယ် နောက်တခုကအာဏာရှင်အစိုးရဆိုတာ နည်းပညာတွေ
အခြားနိုင်ငံကနေခိုးဖို့ တရားမ၀င်နည်းလမ်းပေါင်းစုံနဲ့ ပြန်လည် ဖြန့်ချီဝေငှရောင်းဝယ်ဖေါက်ကားဖို့ ဝန်လေးတပ်
တဲ့ နိုင်ငံမဟုတ်ပါဘူး ၊ အနောက်နိုင်ငံကြီးတွေမှာလည်း ဒီလိုမျိုးရှိတယ်ပေမဲ့ ဥပဒေလမ်းကြောင်းပေါ်ကပြန်လည်
တရားစွဲလို့ ရပါတယ် ဥပမာ Patent Law လိုမျိုးပါ ၊ တရုပ်ဟာကိုယ်ပိုင်နည်းပညာတည်ထွင်မှူကိုအဓိကမထား
ပဲ ဂျပန်၊ရုရှ အပါအ၀င် အနောက်နိုင်ငံကြီးတွေက Technology တွေကို မြန်ဆန်စွာခိုးယူ ပြုပြင်သုံးစွဲခဲ့ ကြရာမှ
လူဦးရေများသဖြင့် လုပ်ခသက်သာပြီး ကမ္ဘာဈေးကွက်ကိုအမြန်ထိုးဖေါက်ဝင်ရောက်အောင်မြင်ခဲ့ တာပါ ၊ကျွန်
တော်တို့ နိုင်ငံလည်းအဲဒါမျိုးဖြတ်လမ်းမြန်မြန်လုပ်သင့် တယ်လို့ လောလောဆယ်မြင်ပါတယ်..။ ကောင်းတာဆိုး
တာ၊တရားတာမတရားတာကို ကျွန်တော်ပြောနေခြင်းမဟုတ်ပါ အခြေအနေမှန်ကိုပြောနေခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။
ဒေသဆိုင်ရာ အားနည်းချက်ကိုကြည့် မယ်ဆိုရင်လည်း မြန်မာစစ်အုပ်စုအုပ်ချပ်သူတွေနဲ့ အာဆီ
ယံနဲ့အကျိုးတူစည်းပွားဖြစ်နေတာကိုတွေ့ ရပါတယ် မြန်မာပြည်သူတွေ၇ဲ့ ခံစားခွင့် ဘယ်လောက်အထိရှိနိုင်မှာ
လဲ ဆိုတာက အားလုံးသိကြပါတယ်၊ ထက်မျက်ရဲ ရင့် တဲ့ မြန်မာလူမျိုးတွေ၇ဲ့ သမိုင်းကို အာဆီယန်နိုင်ငံအများစု
က ကြောက်ကြပါတယ် မြန်မာနိုင်ငံဟာ စစ်မှန်တဲ့ အစိုးရရဲ့ ဦးဆောင်မှူအောက်မှာ စင်္ကာပူနိုင်ငံလို ထောင်တက်
သွားပြီး သူတို့ နဲ့ ဒေသဆိုင်ရာ စီးပွားပြိုင်ဖက်နိုင်ငံဖြစ်လာမှာမျိုး ကို အာဆီယံနိုင်ငံအချို့ အထူးစိုးရိမ်နေကြပါ
တယ် ဒါကြောင်လည်းမြန်မာစစ်အစိုးရကို အသိမသာ မြှောက်ပင့် ထောက်ပံပေးပြီး ပြည်တွင်းရေးပြသနာကို အာဆီယံနိုင်ငံတွေက ဆွဲဆန့် ထားကြတာပါ ။ တရုပ်ကလည်း သူတပြည့် ပဲ ဖြစ်နေစေ ချင်ပြီး တောင်ကိုယီယား
ထိုင်း ဖိလပိုင် နိုင်ငံတွေလိုကမ္ဘာနဲ့ လွတ်လပ်စွာ မြန်မာနိုင်ငံဆက်ဆံ လာမှာမျိုးသူတို့ မလိုလားကြပါဘူး ။ဒါကြောင့် အာဆီယန်နိုင်ငံအချို့ ဟာမြန်မာပြည်မှာစစ်မှန်သောအစိုးရတရပ်ပေါမှာသူတို့ သိပ်မလိုလားတာပါ
မြန်မာနိုင်ငံကသယံဇာတတွေ သူတို့ ဈေးပေါပေါနဲ့ မရတော့ ဘူးပေါ့ 
လူဆိုတာအနဲအများဆိုသလိုအာဏာတို့ စည်းစိမ်တို့ မက်တပ်ကြတဲ့ သဘောကရှိလေတော့ ရှေ့ 
ခေါင်းဆောင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အကြီးဆုံးကြီးတွေကပေးဖို့ ကြံရွယ်တယ်ပဲထားဥိး နောက်တက်လာမဲ့ သူတွေကငါတို့ 
အလှဲ့ ပြီးမှ ပေးရင်တော့ ပိုကောင်းမှာပဲလို့ လက်တွေအကောင်အထည်မဖေါ်ရင်တောင်မှတွေးမိကြမှာပါပဲတ
ကယ်ကို ရိုးသားတဲ့ တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေနဲ့ သူတို့ ရဲ့ မိသားစုတွေ အနီးကပ်သိပါတယ် သူတို့ ကိုယ်
တိုင်ပင်လျှင်ပြည်တွင်းထဲမှနေတုန်းက ယုံကြည်ချက်ခံယူချက်တွေနဲ့ ပြည်ပမှာအတန်ကြာနေထိုင်ပြီးသကာလ
အတွေးအခေါ်ယူဆချက်တွေဟာမတူညီပဲပြောင်းလွဲလာတာတွေရပါတယ်၊ ဧရာဝတီမြစ်ရေကို တားဆီးတမန်
တုပ်၍မရသလို ယနေ့ ကမ္ဘာကြီးနဲ့ ပြောင်းလွဲနေတဲ့ လူမှူအသိုင်းအ၀န်းကြီးနဲ့ ကိုက်ညီမဲ့ စနစ်ဆိုတာ ပြောင်းလွဲ
ရစမြဲပါ လူဟာလူပါပဲ အရှေ့ တိုင်းမှာနေလို့ ၊အနောက်တိုင်းမှာနေလို့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်လို့ ခရစ်ယန်ကိုးကွယ်
လို့ ဆိုတာတွေနဲ့ မဆိုင်ပါဘူး အားလုံးလွတ်လပ်မှူနဲ့ တရားမှတမှူကိုလိုလားကြတာပါပဲ
အားလုံးသိပြီးသားစကားတခုဖြစ်တဲ့ လူနှင့် ရုပ်ပတ်ဝန်းကျင်တို့ ၏အင်ညမညဖြစ်စဉ်ဆိုတဲ့ စကား
အတိုင်း ယနေ့ တိုးတက်ပြောင်းလွဲနေတဲ့ ရုပ်ဝထ္ထု ပစ္စည်းတွေ နည်းပညာတွေနဲ့ လိုက်ညီပြီးလူတွေရဲ့ စိတ်ဓါတ်
တွေတွေးခေါ်ခံယူပုံတွေဟာလည်းပြေင်းလွဲတိုးတက်နေတယ်ဆိုတာမေ့ လို့ မရပါဘူး ပြည်သူတတွေအပေါ်မှာ သတင်းအမှေင်ချ ၀ါဒဖြန့် ချီမှူ ဟာ ယနေ့ တရုပ်နိုင်ငံမှာရော မြန်မာနိုင်ငံမှာပါ ရေရှည်လုပ်လို့ မရတော့ ပါဘူး
ပြည်သူတွေကိုမျက်စေ့ ပိတ်နားပိတ်ထားချင်းဟာ လူမျိုးတမျိုးလုံး အနာဂတ်အညွန့် တုံးစေမဲ့ဘိန်းကြွေးအုပ်ချုပ်
ဂဠုန် ဦးစော မျိုးနွယ်ဆက်တွေဖြစ်လာမဲ့ ကြံ့ ဖွတ်တို့ ၊ စွမ်းအားရှင်တို့ ဆို တဲ့ ပြည်သူတွေကို
လည်း အတွေးခေါ်ရေးရာတိုက်ပွဲ သဘောတရားရေးရာစည်းယုံးမှူတွေနဲ့ချည်းကပ်ကြိုးစားယူဖို့ လိုပါတယ်ပြည်
သူကို ပြည်သူနဲ့ ပြန်လှည့် တိုက်ပေးတဲ့ ဖက်ဆက်နာဇီတို့ ရဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းထောင်ချောက်ထဲ မှာသိပ် အချိန်ကုန်ခံနေလို့ အဖြစ်ပါဘူး စစ်တပ်ကွဲဖို့ ဆိုတာကို ဗေဒင်ဆရာရဲ့ထီပေါက်ကိန်းဟောစာတမ်းလို့ စိတ်ကူး
ယဉ်ဖက်တွယ်ပြီး ရသေ့ စိတ်ဖြေလုပ်နေလို့ မရတော့ ပါဘူး လက်တွေကျတဲ့ ချေလှမ်းတွေကိုစတင်သင့်ပါတယ်
တလှမ်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ ။မိမိတို့ နဲ့ အနည်းဆုံးမှာရှိတဲ့ မျက်စေ့ ရှေ့ ကအနည်းဆုံးပြစ်မှတ်သည်သာ မိမိတာဝန်ဖြစ်
တယ်လို့ ခံယူသင့် ပါတယ် ။
တမျိုးသားလုံးပြန်လည် နလံထူလာဖို့ အတွက် ရိုးသားတဲ့ အမျိုးသားရေး စိတ်ဓါတ်အတွေးအခေါ်
နည်းလမ်းတရပ်မှာ သဘောထားကွဲလွဲသူတိုင်းယုံကြည်ချက်ခံယူချက်မသူတူတိုင်းဟာ ရန်သူမဟုတ်ဘူး ဆိုတဲ့ 
သဘောတရားရေးကိုလက်ခံထားကြပါတယ် အမျိုးသားပြန်လည် ထူထောင်ရေး ( သင့် မြတ်ရေး အပြီး ) အ
တွက် အမျိုးသားရေးစိတ်ဓါတ်အခြေခံရှိသောသူတိုင်းနဲ့ လက်တွဲလုပ်ဖို့ အချိန်ကြရောက်လာနေလေပြီ ကျွန်
တော်အနေနှင့် တော့ ဒီမိုကရေစီစံနစ်ကိုမြတ်နိုးသောသူလက်ခံသောသူများမှသာတိုင်းပြည်ကိုချစ်ကြသည်လို့ 
မခံယူပါ သို့ သော် ပြည်သူမှစစ်မှန်စွာရွေးချယ်တင်မြှောက်သောအစိုးရတရပ်သာလျှင် စစ်မှန်သောအမျိုးသား
ရေးနှင့် ကမ္ဘာ့အဆင့် အတန်းမှီတိုင်းပြည်ကိုပြန်လည်ထူထောင်နိုင်မည်ဟုသာယုံကြည်ပါသည်...
တင်ပြသူ Canada Myanmar Group at 10:16 a.m. 1 comment: Links to this post
မနားတမ်းတည့် ....။ ။
တင်ပြသူ Canada Myanmar Group at 7:00 p.m. No comments: Links to this post
အတွေးငှက်များ ( ငှက်များနားပါစေ )
( သက်သက်မဲ့ မိုးစီရီးမှ )
တင်ပြသူ Canada Myanmar Group at 9:21 p.m. 1 comment: Links to this post
ဆွေးမြေ့ တဲ့ စရိုက်
ဒို့ ရဲ့ ရှေ့ မှာ
အာဏာရှင်ကလေးများကို လေ့ကျင့် ပြုစုပျိုးထောင်ပေးနေခြင်းမဟုတ်စေရ)
တင်ပြသူ Canada Myanmar Group at 9:14 p.m. No comments: Links to this post
ကမ္ဘာ အနှံ့ ပျံ့ နှံ့ လင့် ကစား.....။
ရင့်ကျက်ခဲ့ ညတွေနဲ့ 
ရယ်နေတဲ့ အာရုဏ်ဦးတို့ 
( ဖလူးစခန်း ယန်းငွေ့မြူနှင်းငွေ့ များကြားမှ )
တင်ပြသူ Canada Myanmar Group at 11:18 p.m. 1 comment: Links to this post
စစ်တပ်ကို တိုက်ခိုက်နေတာမဟုတ်ပါ သို့ သော်
အိမ်မက်ထဲက ခင်ဗျားနဲ့ က္ဈန်တော်
အဲဒါပေမဲ့ မတရားသူအများစုကစစ်တပ်ထဲမှာရှိနေတော့ 
သူတို့ ကိုပြစ်မှတ်ထားရတာပေါ့ ..
ဗျာ ... ဒါ ပေါ့ .......
ဗိုက်ဆာတဲ့ အခါလည်း ခေတ္တနားချင်နားချင်နားနေမယ်
အင်း..ဘယ်သူကမှ ခိုင်းလို့ မဟုတ်ဘူး..
သွေးတွေ ၊မျက်ရည်တွေရဲ့ တွန်းအား
မာန တွေရဲ့ တွန်းအား
မတရားမှူကို မခံချင်စိတ်ရဲ့ တွန်းအားတွေကလာတာပါ
ဒါပေါ့ကောင်းတာတွေလည်းရှိပါတယ်
၀တ်ကြွေးလို့ ပဲဆို ဆို
ကို့ ကို ကိုယ် မှရပ်ပြစ်လို့ မရတာ...
တစ်သက်မှာတခါပဲ လူဖြစ်ရတဲ့ ဘ၀မှာ
တရားမျှတမှူကလာတယ်လို့မထင်ဘူးလားဗျာ....
တင်ပြသူ Canada Myanmar Group at 10:49 p.m. No comments: Links to this post
Burma: Global Day of Action ( Toronto )
Burma Relief: Local Donation Sites by Countries
နိုင်ငံအလိုက် အလူ ငွေထည့် ဝင်နိုင်သော နေရာများ
တင်ပြသူ Canada Myanmar Group at 10:50 a.m. No comments: Links to this post
မုန်တိုင်းဒုက္ခသယ် ဓါတ်ပုံ များ
ဒီကိုနှုိပ်ပါ Click HERE
တင်ပြသူ Canada Myanmar Group at 9:49 a.m. No comments: Links to this post
ကြသည်ကို အားလုံးသိရှိလေးစားကြပါသည်.. မိမိတို့ ရသမျှ သတင်း ၊ ဓါတ်ပုံ များ ၊ဇတ်လမ်း များ ကို တပ်နိုင်သမျှလမ်း ကြောင်းအမျိုးမျိုးမှ သတင်းဌါနများ၊ သူငယ်ချင်းများ ၊ ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီး
သို့ ထပ်ကာတလဲ လဲ ပို့ ဆောင်ပေးကြစေလိုပါသည်..
တရုပ်ပြည်၏ ငလျှင်ဘေးဒဏ်သည် ကျွန်တော်တို့မုန်တိုင်းဘေးဒုက္ခလောက်မကြီးလှပါ
ကမ္ဘာအရပ်ရပ်ရောက်တရုပ်လူမျိုးတို့ ၏လှုပ်ရှားမှူသည် ကျွန်တော်တို့ မြန်မာ မုန်တိုင်း အရေးကြီးနောက်ရောက်သွားမည်ကို အထူးစိုးရိမ်မိပါသည်..
ယနေ့ ကျွန်တော်ကုန်တိုက်ကြီးတစ်ခုသို့ သွားရာ ထိုကုန်တိုက်ရှေ့ တွင် တရုပ်လူမျိုးများသည် ဆင်တူ အဖြူ
ရောင် ( တရုတ်ငလျှင်ဘေးဒုက္ခသယ်များကို ကူညီကြပါ ဟုရေးထားသော ) ၀တ်စုံ ကိုဝတ်ဆင်ပြီး ဓါတ်ပုံ ပိုစတာ များ လက်ကမ်းစာစောင်များ အလှူခံပုံးများကို ခေါက်လျှက် မရှက်မကြောက်အော်နေကြပါသည်. ထိုသို့ နေရာအ နှံ့ အပြားသူတို့ လုပ်နေကြကြောင်း သိရပါသည်...ကျွန်တော်လည်း ငွေအလှူထည့် ဝင်ခဲပါသေးသည
်ဘဏ်များ သို့ မည်သူမဆို ပိုမို လွယ်ကူစွာ တိုက်ရိုက်လှူနိုင်သောစနစ်များ ပြုလုပ်ထားသည့် အပြင် သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရသို့ ဝင်ထွက်မှူမှာလည်း သွက်လှပါသည်..တရုပ်လူမျိုးများ၏ငလျှင်ဘေးဒုက္ခကို စာနာသနားမိသော်လည်း ပိုမိုကြီး မားသည့်ကျွန်တော်တို့ မြန့် မာ လေမုန်တိုင်းဘေးဒုက္ခကြီး ဖြေးဖြေးခြင်း မှေး မှိန်သွားမှာကို စိုးရိမ်မိပါသည်.. ကျွန်တော်တို့ ချည်းပဲ မနိုင်ပါ ကမ္ဘာ့ အကူအညီ မလွဲ မသွေလိုအပ်ပါသည်.. ရေရှည်ထိတိုင် လိုအပ်ပါသည်...
ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံသည် ပို မိုဆင်းရဲပြီး ကျွန်တော်တို့ အစိုးရသည် မိမိတို့ အာဏာမြဲဖို့ ဆိုလျှင်ပို မို ၍ လူသား
ခြင်းစာနာမှူကင်းမဲ့ သည့် အပြင် ကမ္ဘာပြည်သူတို့ ၏အကူအညီများကို လည်း ရသင့် သလောက်မရခဲ့ ကြသော
အခြေအနေတွင် ..အဘယ်မျှကြာအောင် ၊ ဘယ်လောက်အထိအောင် ကူညီကြရမည် ကို ကျွန်တော်တို့ အား
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာတမျိုးသားလုံး၏ အမျိုးဂုဏ်သိက္ခာနှင့် အဏာဂတ်အောင်မြင် မှူလမ်းစများအတွက် ပြည်တွင်းနှင့် ပြည်ပ သည်..တဦးကို တဦးအပြန်အလှန်အားကိုးအလေးထား သွားကြရမည့် အနေအထားဖြစ်ပါသည်
ပြည်တွင်းရှိရဟန်းရှင်လူ ပြည်သူများ ၊ တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်များသည် သေနတ်ပြောင်းဝရှေ့ နှင့် ထောင်
နုတ်ခမ်းဝများတွင် တိုက်ပွဲ ၀င်နေကြသလို ပြည်ပရောက်မြန်မာ့ တိုင်းရင်းသား အင်အားစုတစ်ရပ်လုံးသည်
လည်း မိမိတို့ နှင့် အနီးစပ်ဆုံးဖြစ်သည့် စစ်အစိုးရယန္တရားများ အပေါ်တွင်တိုက်ပွဲဝင်နေကြပါသည်..မိမိတို့ နေ
ထိုင်ရာနိုင်ငံအစိုးရအဆင့် ဆင့် နှင့် လည်း ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်လျှက်ရှိသလို မိမိတို့ လက်လှမ်းမှီသ၍ နီးစပ်ရာ မြန်မာပြည်သူများအပေါ် တွင်လည်း အလျှင်းသင့် သလို့ စီးယုံး လျှက်ရှိနေကြပါသည်..
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဘယ်အစိုးရ ဘယ်လို ပင် ထပ်မံပေါ်ပေါက်စေတော့ လက်ရှိစစ်အစိုးရထက်ကောင်းမှာသေချာ
ပါသည်.. ယခုကဲ့ သို့ ကမ္ဘာက မြန်မာပြည်သူများကို သနားအာရုံစိုက်နေသည့် အချိန်တွင် ပြည်ပအဖွဲ့ အစည်းများ၊ သတင်း မီဒီယာများ ရှေ့ တွင် ပြည်သူအုံကြွမှူကြီးထပ်မံဖြစ်မည် ကို မြန်မာ စစ်အစိုးရ ကြောက်ရွံ့ လျှက်ရှိသဖြင့်အလှူပစ္စည်းများကို ပင် လျှင် ဒုက္ခရောက်နေသောပြည်သူတို့ ၏ မျက်ရေ ကို မငှဲ့ ပဲ တားဆီးလျှက်ရှိနေရသည်.နိုင်ငံခြား သားများပြည်တွင်းသို့ ဝင်မှကို အစဉ်အမြဲကြောက်နေသော တံခါးပိတ်အစိုးရ ၊ အိုးမှုတ်ခွက်အောက်ကဖါးအစိုးရ ၀ါးလုံးခေါင်းထဲ လသာသည်သည့် အစိုးရဖြစ်ပါသည်.. သူတို့ ကိုယ်တိုင်လည်း ဘယ်နိုင်ငံမှမထွက်ရဲပါ ၊ အာရှနိုင်ငံအ ချို့ သို့ သေရေးရှင်ရေးသွားရသည့် ကိစ္စမျိုးရှိလျှင်ပင် စကား ကျယ်ကျယ်မပြောရဲသော ၊ရင်ကော့ လမ်းမလျှောက်
၀င့် သော အစိုးရဖြစ်ပါသည်.. ပြည်တွင်းမှပြည်သူများကို သာ လက်နှက်အားကိုးဖြင့် အနိုင်ကျင့် ရဲပြီး ပြည်ပမှ ခေါင်းဆောင်အချင်းချင်းကြားတွင် အမှီးကုတ်နေလေ့ ရှိသော အိမ်ကျယ် အစိုးရဖြစ်ပါသည်.. ဒင်းတို့ မည်သို့ ပင် ချိမ်းခြောက်အနိုင်ကျင့် အုပ်ချုပ်ပါစေ အမှန်တရား သည် အင်အားအဖြစ် တနေ့ ပေါက်ကွဲ အုံ ကြွ ရမည် မှာ ကမ္ဘာသမိုင်းအစဉ်အလာဖြစ်ပါသည်... နာကြီးမှူအဆင့်ဆင့် အဆက်ဆက် ဒေါသမီးများသည် .. စစ်အစိုးရတို့ ၏ ယမ်းတိုက်များကို ဆက်လက်ကူးစက်လောင်မြိုက်စေ ရမည်... လက်တွေကျသော မျက်စေ့ရှေ့ မှတော်လှန်ရေးသည် .. မိမိလက်တကမ်းအတွင်းရှိပြည်သူများ၊ သံရှံးများမှစ တင်ကြရမည်ဖြစ်သည်...
အကယ်၍သာယခုနေစစ်မှန်၍တရားမျှတသော ပြည်သူများမှ ရွေးချယ်ထားသည့် အစိုးရတရပ် အုပ်ချုပ်နေပါ
က မြန်မာပြည်သူများ သဘာဝဘေးအန္တရယ်ခံစားရဦးတော့ ဤမျှလောက် နာတာရှည် ဖြစ်နေ ကြမည်မဟုတ်
ပါ မြန်မာပြည်သူများ ၏ အမှန်စင်စစ်ရေရှည် ဆင်းရဲဒုက္ခတွင်းမှ လွတ်မြောက်ရာ လမ်းကြောင်းသည်ကား မြန်
မာစစ်အစိုးရ ပြုတ်ကျရေးပင်ဖြစ်သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ မေ့ လျှောမနေကြပေ..
တင်ပြသူ Canada Myanmar Group at 10:56 p.m. No comments: Links to this post
I need your urgent help to save the hundreds of thousands lives in Burma if not millions. Please sign the petition immediately and here is the link. Pls forward as much as you can.
TO SIGN CLICK လက်မှတ်ထိုးကြပါHERE
Bloody River came from China Video Click ဒီမှာနိပ်ပါ
Global Day of Action on Burma HERE
မိမိတတ်နိုင်သည့် ဖက်မှ ၀ိုင်းဝန်းကူညီကြပါရန်....
ဆက်လက် လက်ဆင့် ကမ်း ပေးကြပါရန်...
တင်ပြသူ Canada Myanmar Group at 4:20 p.m. No comments: Links to this post
ဒီမိုကရေစီမုန်တိုင်းကြီး ထပ်မံ ဖြစ်ပေါ်လာဦးမည်...
သွေးချောင်းစီးတဲ့ မြန်မာပြည် VIDEO HERE
အင်္ဂလိပ် အခက် ဗမာ အချက်
ဟူ၍ နယ်ချဲ့ တော် လှန်ရေးခေတ်က စကားပုံပေါ် ပေါ်က်ခဲ့ ဘူးသည်..
ယခုလည်း မြန်မာစစ် အစိုးရ၏ ပြည်သူတို့ အား အနိုင်ကျင့် အာဏာာ
သိမ်းပိုက် အုပ်ချုပ်ထားမှူသည် အခက်အခဲ များ နှင့် ပိုမို တွေ့ ကြုံ လာ
တော့မည်.. ထူထုအုံကြွမှူများ ထပ်မံဖြစ်ပေါ်လာဦးမည်.
ပြည်တွင်းအခြေနေများကိုကြည့် မည်ဆိုလျှင်လည်း စားနပ်ရိက္ခာ၊လောင်
စာဆီ၊ရာသီဥတုဖေါက်ပြန်မှူ၊စသည် တို့ ၏ ကွင်းဆက်များကို ပြည်သူ
တို့ ပိုမိုခံစားရတော့ မည့်အပြင် ကာကွယ်ခြင်း၊ကယ်ဆယ်ခြင်း၊စောင့် 
ရှောက်ခြင်းမပေးနိုင်သည့် အစိုးရ ၊ ကမ္ဘာနိုင်ငံအများစုနှင့် ဆက်ဆံရေး
မပြည်လည်သည့် အစိုးရကို ပြည်သူတို့ ၏မုန်းတည်းမှူသည်ပိုမိုအားကောင်းလာ
ကမ္ဘာ့ မျက်နှာဇာတွင် လည်း မြန်မာစစ်အစိုးရ၏ အသုံးမကျ ညံဖျင်း
မှူသည် ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးကပိုမိုအာရုံစိုက်လာသည့် အပြင် ကမ္ဘာက မြန်မာ
မြန်မာစစ်အစိုးရသည်လည်း ကမ္ဘာ့ မိဒီယာများ၊ လူမှူကူညီကယ်ဆယ်ရေးအသင်း
အဖွဲ့ များ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဝင်ရောက် နေထိုင်နေကြမည်ကို တွေးတောကြောက်
လန့် နေချိန်ရလည်း ဖြစ်သည်...
နိုင်ငံတကာရောက် မြန်မာလူမျိုးအသီးသီး၊ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုအသီးသီးသည်
လည်း ပြည်တွင်းရှိ မိမိ လူမျိုးများ ၊ ဆွေမျိုးများ အတွက် တပ်လှန့် နိုးကြား..
လတ်တလောပြရုပ်ဖြစ်သည့် ပြည် သူများလေဘေးသင့် သည် ကိစ္စ
ကိုပင်လျှင်ပြည်သူများအား ကာကွယ် သတိပေးခြင်းမပြုနိုင်သည့် 
အပြင် ကယ်ဆယ်ရေး စောင့် ရှောက်ရေးအပိုင်းဉ်လည်း အားမကိုးလောက်
သည့် ဤတရားမ၀င်စစ်အုပ်စုသည် ... သူခိုးကြီးတော့ ဒမြ ၊ ဒမြကြီး
တော့ သူပုန် ၊ သူပုန်ကြီးတော့ အစိုး ရဟူသည့် စကားအတိုင်း သူခိုး
ကြီးများအဆင့် သာ ကမ္ဘာကအသိအမှတ်ပြုထားသဖြင့် ဒုက္ခသယ်
များကိုပေးမည့် ပစ္စည်းများကို ပင် သူတို့ အား မယုံကြည် ကြတော့ 
ဤသည် မှာ မြန်မာပြည်သူများအတွက်၊ဒီမိုကရေစီဘက်တော်သား
အချို့ ၏ မုန်တိုင်း ဘေးအန္တရယ်မှ ကယ်ဆယ် လိုက်ရုံတင်မကပဲ မြန်
မာပြည်သူတစ်ရပ်လုံးအတွက် နာတာရှည်ခံစားနေကြရသည့် 
အာဏာရှင်တို့ ၏မတရားမှူ မုန်တိုင်းကြီး၏
ဘေးရန်မှ ကယ် တင် ရန် ..မိမိတို့ နိုင်ရာ သန် ရာ ယုံကြည်ရာ
လက်လှမ်းမှီရာ ဘက်အသီးသီးမှ ဒီမိုကရေစီမုန်တိုင်းကြီး
မြန်မာ နိုင်ငံအ၀ှမ်းတွင် စတင်တိုက်ခိုက်ရတော့ မည့် နှစ် ဖြစ်ပေ တော့ သည်...
အင်း မုန်တိုင်းဆိုကထဲ က အနဲ နှင့် အများ တော့ တိုင်းပြည်ပျက်စီးဆုံးရှံးနစ်နာ
မုန်တိုင်း ပြီးလျှင် လေပြေလာစမြဲ ဖြစ်သည်.....
ယနေ့ အရှိန်အဟုန်နှင့်တိုးတက်နေသော ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံအသီးသီးအလည်တွင်
ငါ့ နိုင်ငံ ငါ့ လူမျိုးသည် အဘယ်ကြောင့် ဆက်တိုက်ကံဆိုးနေရပါသနည်း..
တင်ပြသူ Canada Myanmar Group at 8:34 p.m. No comments: Links to this post
( ၁၉၉၂ )
ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံအသီးသီးရှိ တော်လှန်ရေးတိုင်းတွင်
စစ်ရေးလက်နှက် ၊ စီးယုံးရေးလက်နှက် ၊ စီးပွားရေးလက်နှက် ၊
ဆက်သွယ်ရေးလက်နှက် ၊ ၀ါဒဖြန့် ချီရေးလက်နှက်
စသည် တို့ ကို သုံးရတပ်သည် ....။ ။
တင်ပြသူ Canada Myanmar Group at 12:39 a.m. No comments: Links to this post
မိုးယံဝင့် ဝင့် 
လွင့် ထူမည် ...၊၊ ။
( ၁၉၈၈ )
တင်ပြသူ Canada Myanmar Group at 12:38 a.m. No comments: Links to this post
မနက်ဖြန်ကို စောင့် ဆိုင်းခြင်း
မင်းသတိထားရလိမ့် မယ်...။ ။
( ၁၉၈၉ )
တင်ပြသူ Canada Myanmar Group at 12:15 a.m. No comments: Links to this post
စစ်အာဏာရှင်တို့ ၏ အတ္တမုန်တိုင်း ကြီးလာဦးမည်
VDO ဗီဒီအို ဖြင့် ကြည့် ရန်
မုန်တိုင်းကြားကပြည်သူများ ( အတ္တမုန်တိုင်း )
ထိုသတင်းကြားရသော နေ့ က ......
ကျွန်ုပ်တို့ ရင်ထဲ တွင် ဒေါသမုန်တိုင်းကြီးတိုက်ခတ်လျှက်ရှိ၏၊ ထိုမုန်တိုင်းနှင့် အတူ ဂရုဏာ
မျက်ရည်မိုး ပေါက်တို့ လည်း ရွာဆင်းလာလေသည်...
တောက်......... ကိုယ့် ပြည်သူတွေကို ကာကွယ်မှူမပေးနိုင်တဲ့ အစိုးရ၊လူသားခြင်းကယ်
ဆယ်ရေးထက် မိမိအာဏာတည်မြဲ ရေးကို ပိုမို အာရုံစိုက်နေသောအစိုးရ..စစ်အသုံးစ
ရိတ် ( ၀ါ ) စစ်တပ်အာဏာ ပိုမိုခိုင်ခန့် ကြီးများလာရေး အတွက်ကိုသာ
ပိုမိုသုံးစွဲ ခဲ့ ကြသည့် အပြင် အရာရှိကြီးငယ်တို့ ၏အဆင့် ဆင့် လဒ်စားမှူ များက ပြည်သူ
တို့ ကို ပိုမိုဆင်းရဲတွင်းနက်စေခဲ့ သည်၊ မြန်မာ ပြည်သူတို့ ဘ၀မှာ မိုးမှောင်ကျ
လမ်းစ ပျောက်နေကြရသည် မှာ ကြာလှပြီဖြစ်သည် ..ယခုဆိုလျှင်ဧရာဝတီတိုင်း အထိနာသွား
သဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ဆန်ဈေးနှင့် အခြားကောက်ပဲသီးနှံဈေးများ ကမောက်ကမဖြစ်
လာကာ အထိကရုံးများပိုမိုဖြစ်လာတော့ မည်၊ ကမ္ဘာပြည်သူတို့ ၏အာရုံစိုက်မှူက
လည်း ပိုမိုအရှိန်အားကောင်းလာနေသည် စစ်အစိုးရ၏နေ၀င်ချိန်ပို၍နီးလာပြီ
မိုးလေ၀သနှင့် ဇလဗေဒ ဦးစည်းဌါနတွင် ခေတ်မှီနည်းပြညာများ ၊ ခေတ်မှီ
မိုးလေ၀သ တိုင်းတာရေး ၊ ထောက်လှမ်းရေး ကရိယာများ မရှိ
သည့် အပြင် အိမ်နည်းခြင်းနိုင်ငံများ၏ သတိပေးချက်ကိုပင် အလေးမထားခဲ့ ပေ..
အမှန်တစ်ကယ်တော့ မြန်မာပြည်သူအများစု ၏ဘ၀သည် အတင်းအဓမ အုပ်ချုပ်သော
စစ်အာဏာရှင်တို့ ၏ အတ္တ မုန်တိုင်း ၊ လောဘ မုန်တိုင်းများ ကြားတွင် လမ်းစပျောက်
ဒုက္ခရောက်နေ ကြရ သည်မှာ ကြာလှပြီဖြစ်သည်၊
နာဂစ်မုန်တိုင်းသည် မြို့ အချို့ ရွာအချို့ ပျက်စည်းပြီး လူသိန်းချီ၍သေ ကြေခဲ့ ရလေ
ပြီ သို့ သော် ထို့ ထက်ကြီးမာသောစစ်အာဏာရှင်တို့ ၏ အထ္ထမုန်တိုင်းကြီးကား မြန်မာ
တစ်နိုင်ငံလုံး တစ်မျိုးသားလုံးကို ချေမုန်းတိုက်ဖျက်ပြစ်ရန် မြန်မာပြည် အလည်ပိုင်း ဒေသ
တွင် ဗဟို ပြုလျှက် စတင်အရှိန် ယူနေပေပြီဖြစ်သည်။
ထို မြန်မာစစ်အာဏာရှင်ကြီး များ၏ ၁၉၈၈ အတ္တမုန်တိုင်းများကြောင့် ပြညာတပ် များ
ကျောင်းသားများ၊ ပြည်သူများ ပြောက်ဆုံးခဲ့ ရပြီးပြီ၊ ယခုနှစ်ဦးပိုင်းကလည်း သံဃာတော်များ
စွာ သေကြေ ပျက်စီးပျောက်ဆုံးခဲ့ ရပြီးပြီ ဖြစ်သည်..ရွာပေါင်းများစွာ အတင်းပြောင်းရွေ့ ခိုင်း
ခြင်းအားဖြင့် ပျက်စီး ပျောက်ဆုံးခဲ့ ရပြီးပြီဖြစ်သည်၊ ပြည်သူများ၏ အဏာဂတ်များစွာ
ဘ၀များစွာမိုးမှောင်ကျ ပျောက်ဆုံးခဲ့ ကြပြီးပြီ ဖြစ်သည်..
မြန်မာပြည်သူများ၏ ဘ၀ ရှေ့ ရေး သည် ရှေ့ ဆက်၍ အဘယ်မျှ ပျောက်ဆုံးနေ
ကြရဦးမည်နည်း... အဘယ်သို့ ကာကွယ်တားဆီးကြမည် နည်း ၊ အဘယ်သူ လာ
ရောက်ကယ်တင် ကြမည် နည်း ဆို သည့် မေးခွန်းများ ကို မိမိတို့ အဏာဂတ်ကို
မိမိတို့ ဖန်တည်းလို သော မြန်မာ ပြည်သားတစ်ယောက်စီတိုင်း စဉ်းစားအဖြေထုတ်
တိုင်းပြည်ကို ရွေချ ပေးလျှင်တောင်မှ အမှန်တရားကို မြတ်နိုးသော ကျွန်ုပ်တို့ နှင့် 
ယနေ့ ကမ္ဘာ မှ လေးစားလက်ခံမည်မဟုတ်ပါ...
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ..ယနေ့ ကမ္ဘာမည်သည်ကား လွတ်လပ်ခြင်း၊တရားမျှတခြင်းတို့ နှင့် အတူ...
ကိုယ့်င်္ကြမ္မာကိုယ်ဖန်တည်းခွင့် တို့ ကို တန်ဖိုးထားမြတ်နိုးလာ ကြသောကြောင့် ဖြစ်သည်
စစ်ဏာနာရှင် တို့ ၏ အတ္တမုန်တိုင်း၊ လော ဘမုန်တိုင်း ကြီး၏ဘေးကို လည်း
ကြိုတင်ကာကွယ်တားဆီးကြပါ စို့ ...
တင်ပြသူ Canada Myanmar Group at 1:49 p.m. No comments: Links to this post
ကနေဒါ နိုင်ငံအကြောင်း တစေ့ တစောင်း....
ကနေဒါ နိုင်ငံသည် မြောက်အမေရိကတိုက်၏မြောက်ပိုင်းတွင်တည်ရှိပြီး ၁၆ ရာစုနှစ်လောက်မှစ၍ပြင်သစ်လူမျိုး
တို့ စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ သည် ၊ များမကြာမှီအင်္ဂလိပ်တို့ လည်းဝင်ရောက်လာကာ ဒေသခံ အင်ဒီးယန်းလူမျိုးတို့ ထံမှတ
ဖြေးဖြေးသိမ်းပိုက်နယ်ချဲ့ ခဲ့ ကြသည်။ ၁၈၆၇ နှစ်ခုနှစ်လောက်တွင် အင်္ဂလိပ်သည် ပြင်သစ်ကိုစစ်နိုင်ပြီး ကနေဒါ နိုင်
ငံအဖြစ် အင်္ဂလန်မှစတင်တိုက်ရိုက်အုပ်ချုပ်ခဲ့ သည်။ စတင်ဖွဲစည်းတည်ထောင်ကာစက ပြည်နယ်ကြီး ၄ ခုသာရှိသော်
လည်း ယခုအခါတွင် ပြည်နယ် ၁၀ ခုနှင့် ဒေသ ၃ ခုရှိလေသည်။ ၄င်းတို့ မှာ Alberta , British Columbia ,Manitoba
,New Brunswick ,Newfoundland ,Nova Scotia ,Ontario ,Prince Edward Island ,Quebec , Saskatchewan
ဖြစ်ကြပြီးဒေသကြီးသုံးခုမှာ Northwest Territories ,Nunavut ,Yukon တို့ ဖြစ်ကြသည်။
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းချုပ် ။ ။ ကနေဒါနိုင်ငံသည် ဒီမိုကရေစီ ၀ါဒကိုအထူး လက်ကိုင်ထားပြီးလွပ်လပ်စွာ တွေးခေါ် ရေးသား
ပြောဆို စည်းရုံး ခွင့် သည် မွေးရာပါလူ့ အခွင့်အရေးအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုသည့် နိုင်ငံဖြစ်သည်။ ဖက်ဒရယ်အစိုးရ ၊ ပြည်နယ်
အစိုးရ နှင့် မြူနီစပါယ်အစိုးရဟူ၍ သုံးဆင့် ရှိပါသည်၊ သို့ သော် ဗြိတိသျှကော်မင်းဝက်အတွင်းပါဝင်နေသေးသဖြင့် နိုင်ငံဦး
လျှောင်အဖြစ် ဗြိတိသျှဘုရင်မကြီး အက်လီဇဘက် ၂ အား တင်မြှောက်ထားသည်၊ သူမကိုယ်စား ဘရင်ခံချုပ်ကို ၄ နှစ်တစ်
ကြိမ်ရွေးချယ်ခန့် ထားပြီး ပြည်နယ်တစ်ခုခြင်းစီတွင်လည်း လက်ထောက်ဘုရင်ခံတဦးစီရှိကြသည် ။ ထိုဘုရင်ခံများအားလုံး
သည် အုပ်ချုပ်ရေးတွင်မပါဝင်ကြပဲ အဆောင်အရောင် အဖြစ်သာဆောင်ရွက်လေ့ ရှိကြသည်။
လက်ရှိနိုင်ငံရေးပါတီများမှာ လစ်ဘရယ်ပါတီ ၊ ကနေဒီယန်အလိုင်းရင့် ပါတီ ၊ ပီစီပါတီ ၊ အင်ဒီပီပါတီ နှင့် ကီဘက်ကာ ပါတီ
တို့ ဖြစ်ကြသည်၊ အုပ်ချုပ်ရေးအဆင့် သုံးဆင့် အတွက် ထိုပါတီမှ ကိုယ်စာလှယ်များကို ပြည်သူများက လျှိုဝှက်မဲ စနစ်ဖြင့် 
ပညာရေး ။ ။ ပညာကိုဦးစားပေးသည့် နိုင်ငံဖြစ်သည့် လျှောက် မူလတန်းပညာကို ၄ နှစ်မှစတင်သင်ကြာရကာ
အသက် ၁၈ နှစ် တွင် အထက်တန်းပညာကို ၁၂ တန်းအထိ အခမဲ့ သင်ကြားပေးသည့် အပြင် အတန်းတစ်ခုစီတွင်လည်း
ကျောင်းသာ ၂၀ မှ ၂၅ ယောက်ထက်ပိုထားလေ့ မရှိပေ။ ကောလိပ်နှင့် တက္ကသိုလ်ပညာရေးများတွင် ကျောင်လခပေး
ရသော်လည်း ပြညာထူချွန်သူများသို့ စကောလပ်ရှစ်များ ထောက်ပံကူညီမှူများရှိသည့် အပြင်ဝင်ငွေနည်းသည့် မိသားစုဖြစ်
ပါက နေထိုင်စားသောက်ပညာသင်စရိတ် ၏ ရာနူံးအများစုကို အစိုးရထံမှ ငွေချီးရယူ၍ အဆင့် မြင့် ပညာကို သင်နိုင်
သေးသည်၊ အလုပ်လုပ်နေသူများအတွက်ပါ အချိန်ပိုင်းတက်နိုင်သည့် ကောလိပ်ကျောင်းများလည်း ရှိပါသည် ။
ှစီးပွားရေး။ ။ လွပ်လပ်သောဈေးကွက်စီပွားရေးစနစ်ဖြစ်ပြီး လွပ်လပ်စွာရောင်းဝယ်ပိုင်ဆိုင်
ခွင့် ပေးထားပါသည်။ ကားပြင်ရုံမှအစ လေယဉ်ပျံစက်ရှုံကြီးများအထိပိုင်ဆိုင်တည်ထောင်
လုပ်ကိုင်ကြပါသည်နိုင်ငံသုံးငွေကိုလည်းအစိုးရကထိမ်းထားသဖြင့် ငွေစုခြင်း အရောင်းအ၀ယ်
လုပ်ငန်းတို့ ကို ပါ စိတ်ချလက်ချလုပ်ကိုင်နိုင်သည်၊
ကနေဒီယန် ဒေါလာ Canadian dollar (CAD) ကိုသုံးစွဲ ပြီး US ဒေါလာနှင့် တန်းတူတန်ဖိုး
ညီမျှသည်( အကြမ်းဖြင်း ) Trade organizations များမှာ NAFTA, OECD, WTO and others
Statistics တို့ ဖြစ်သည်. GDP မှာ (PPP) $1.274 trillion (2007 est.) (13th) ဖြစ်ပြ၊ီး
GDP growth မှာ 2.7% (2007 est.) ဖြစ်သည် GDP per capita $38,200 (2007 est.)
GDP by sector agriculture (2.1%), industry (28.8%), services (69.1%) (2007 est.)
ငွေကြေးဖေါင်းပွမှူ Inflation (CPI) 2.4% (2007 est.) ဖြစ်သည် Population
below poverty line 10.8% (relative) (2005) / 4.9% (absolute) (2004)
Gini index 31.5% (2004) Labour force 17.9 million (2007 est.)
Labour force by occupation agriculture (2%), manufacturing (13%), construction (6%),
services (76%), other (3%) (2006) Unemployment 5.98% (2007 est.)
အဓီကလုပ်ငန်းကြီးများမှာ transportation equipment, chemicals, processed and unprocessed
minerals, food products, wood and paper products, fish products, petroleum and natural gas
External Exports $440.1 billion (2007 est.) Export goods motor vehicles and parts,
industrial machinery, aircraft, telecommunications equipment, electronics, chemicals,
plastics, fertilizers, wood pulp, timber, crude petroleum, natural gas, electricity, aluminum
Main export partners U.S. 81.6%, UK 2.3%, Japan 2.1% (2006) Imports $394.4 billion (2007 est.)
Import goods machinery and equipment, motor vehicles and parts, electronics, crude oil,
chemicals, electricity, durable consumer goods .Main import partners U.S. 54.9%,
People's Republic of China 8.7%, Mexico 4% (2006) Gross External Debt $758.6 billion (2007 est.)
Public finances Public debt $467.3 billion CAD (Federal, 2007) Revenues $565.8 billion
Expenses $551.2 billion (2007 est.) Economic aid $3.9 billion (donor) (2007) အကြမ်းဖြင်းတင်
ပြထားခြင်းဖြစ်သည်..အသေးစိပ် တစ်ခုခြင်း လေ့လာနိုင်ရန် လင့် များ တင်ပြပေးပါမည်.. ကက်စီနိုကစားရှံ
ကြီးများ၊ မြင်း လောင်းပွဲ များ ကို လည်းဖွင့် ထားပေးသည်..( အပျော်အတွေ့ အကြုံ အတွက်သာကောင်းပါသည်)
ဖွဲ့ စဉ်းပုံ ဥပဒေ ။ ။
အကျဉ်းချုပ်သာတင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပြီးအသေးစိတ်ကိုတိုက်ရိုက်လေ့ လာနိုင်ရန် သက်ဆိုင်ရာ တရားဝင် ၀က်ဆိုက်များကိုလည်းဖေါ်ပြပေးပါမည်။ ။
တင်ပြသူ Canada Myanmar Group at 11:20 p.m. No comments: Links to this post
Cyclone toll could hit 10,000 in Myanmar
ကဒ် ဆိုက်လေ့ ရှိသည်ဟု ဆရာတော်ကြီးများမွက်ကြား...
CORRECTION-SOURCE AND DATE This handout photo released on May 3, 2008 and taken on May 2, 2008 shows tree branches laying across the back ofatruck inastreet blocked duringapowerful cyclone in Myanmar's largest city Yangon. Severe tropical cyclone Nargis lashed Myanmar's main city downing power lines and tearing rooves off houses as residents took shelter in their homes and waited for the storm to pass. RESTRICTED TO EDITORIAL USE
ကမ္ဘာအရပ်ရပ်ရှိသတင်းဌာနကြီးများ အများစုတွင် မြန်မာနိုင်ငံ ၏သဘာဝဘေးဒဏ်ခံရမှူကို အထူးအလေး
ထား၍လူသားခြင်းစာနာမှူအနေ နှင့် ဖေါ်ပြကြသော်လည်း ...ကမ္ဘာအလည်တွင်မျက်နှာမဖေါ်ရဲသော၊ပြည်သူ
တို့ မှတရား ၀င်ရွေးကောက်ထားခြင်းမရှိ့ သည့် မြန်မာစစ်အစိုးရ ကို နိုင်ငံကြီးအများစုက ယုံကြည်စွာ မဆက်
သွယ်ရဲပဲ ပြည်သူများအား တိုက်ရိုက်သာကူညီလိုကြသည်.....
တင်ပြသူ Canada Myanmar Group at 10:12 a.m. No comments: Links to this post
( ၁ ) မွေးဌာနီ...
နှင်းပွင့် ကလေးတွေ ဖွေးရင်ကွယ်
ဖေဖေ ပြန်မသွား... ။ ။
( ၂ ) လိမ်မာတဲ့ သားကလေး
ဆုတောင်းမေတ္တာပို့ ...။ ။
တင်ပြသူ Canada Myanmar Group at 7:51 a.m. No comments: Links to this post
သံသယ ဘီလူး.........ပုံပြင် ..
သံသယ ဘီလူး ....
တပ်စွစုံလင် ရှင်ဘုရင်နှင့် 
သင်းထုံ ပညာရှိ ပေါများဘိ၏...။
တိုးပွားဆန်ရေ ဥစ္စာတွေနှင့် 
ဘုရင့် တိုင်းပြည်သာ ရာစည်ခိုက်....။
ယုတ်မာဘီလူး အသားစားကျုးဘို့ 
ပြည်သို့ ဝင်ရန် သူကြံသော်လည်း
စစ်ကဲတံခါး များပြားစောင့် ကြပ်
မြင့်မြတ်သည့် ဘုန်း စည်းရုံးမြဲ မြံ
မိုးသောက်နံနက် မြို့ ပြင်ထွက်၍
မသူတော်ရသေ့လူတွေရှေ့ မှာ
ဆိတ်စွ ဣနြေ္ဒ တင်ပျင်ခွေထိုင်ကာ
" အရှင်ဘုရား ကျွန်တော်များ၏
ပျော်မွေ့ သီတင်းသုံးပါ ဖရား"..ဟု
မသူတော်ရသေ့အကြံစေ့ ကာ
" ဒီမှာတကာ... ကြွလာချင်ပေမဲ့ 
သင်တို့ ပြည်မှာ လူယောင်ဆောင်ထား
ဘီလူးများရှိလို့ကြွဘို့ မရဲ ဘူး
ဒကာ ကြီးတို့ ..".... တဲ့ .....။
ဤသို့ ဆိုသော် ထိုပြည်တော်တွင်
ပြည့် ရှင် ရွာသား လူအများတို့ 
ကြောက်ရွံ့ ထိတ်လန့်သတင်းပြန့် ကာ
သူငါကြည့် ကြ သံသယ ဖြင့် 
စု ကြတီးတိုး ရွပိုးထိုး ကာ
ညဖက်ဆိုလည်း မအိပ်ရဲ ပဲ
မဲ မဲ မြင်ရာ စိတ်ထင်ကာ ဖြင့် 
တူရာစု ကြ သံသယမှာ
ဖမ်းဆီးကာပင် ရွာအပြင်သို့ 
ဘုရင်က အစ စန္ဒာလအထိ
ကြည့် ကြပြူးပြဲ ဘီလူးပဲထင်ရာ
တစ်ချို့ မှာလည်း ကံမွဲသည့် ဘုန်း
ရွာအပြင်ပို့အလောင်းတို့ ကို
ဆို့ မျို ပျော်ပါး အောင်သွားသူ့ အကြံ
သူထပ်မံလို့ " ဒကာတို့ ပြည်မှာ
နောက်ထပ်ရှာဦး လူ့ ဘီးလူး တို့ 
ကျန်သေး၏.." .....တဲ့ .....။
ရဲရဲမလာဝံ့တချို့ စွန့် သွား
မင်းသားပညာရှိ သာသည့် တိုင်းပြည်
ပြောင်းရွေ့ လေ ပြီ.......။
တိုင်းပြည်မှာလည်း သူ့ မဲ ငါ့ မဲ
ဂလဲ့ စားတန်ပြန် မူမမှန်ဖြတ်ထုံး
တိုက်ကြပါရော အချင်း ချင်း...
အဆိုးချည်းကျန်မှ သံသယဘီလူး ကုန်သွား၏..။
ဘီလူး တကယ် မှာ ဟင်္သာကိုးသောင်း
ပျက်စီကြောင်းဖြင့်ဖြားယောင်းဇတ်ခင်း
" အသားစားဘီလူးသာ ရွာဝင်ပါလည်း
ရွာထဲ ဒီလောက်မပျက်စီးတဲ့ ..." ။
သံသယ ဘီလူး ပါ ရွာဝင်ကာမှ
ရွာလုံးကျွတ်မျှ နောင်တရ သည်...
ရိုးမ ပုံ ပြင်ပါ တကား....။ ။
( ကဗျာပုံပြင်ပြီး၏ ၁၉၉၂ )
( အဇ္ဈထ မဂ္ဂဇင်း မှ ...)
တင်ပြသူ Canada Myanmar Group at 11:03 p.m. No comments: Links to this post
နာဂစ် မုန်တိုင်း နှင့် မြန်မာ ပြည် Toronto, The Globe and Mail, May 7, 2008
Rain hit with such speed 'it left marks on their faces'
by GEOFFREY YORK, Withareport from Matthew Trevisan in Toronto, The Globe and Mail, May 7, 2008
Devastation unimaginable - aid workers stunned to find survivors with 'visible scars, almost burns' as Myanmar toll climbs to 22,000 dead and 41,000 missing
BEIJING, China -- The toll continued to rise yesterday in the aftermath ofacatastrophic cyclone in Myanmar, with 22,000 people dead and officials acknowledging that 41,000 more are missing. More thanamillion survivors are without food, water, electricity or telephones.
Relief workers who finally reached the survivors of Myanmar's cyclone Nargis yesterday were stunned to find scars on their faces, evidence of the ferocity of the rain storm.
"They had visible scars, almost burns, on their faces from the driving force of the rain," said Paul Risley,aspokesman for the United Nations World Food Program. "The rain had pelted them at suchavelocity that it left marks on their faces. Our workers had never seen that before."
UN assessment teams were struggling to reach the hardest-hit villages in the Irrawaddy delta, the main rice-producing region of Myanmar, formerly known as Burma, where roads are almost impassable. When they did arrive, relief-agency helicopters encountered corpses scattered across the rice fields that bore the brunt of the storm.Many people were killed byamassive 3½-metre-high tidal wave that crashed through the delta at the peak of the storm. "It swept away and inundated half the houses in low-lying villages," Maung Maung Swe, Myanmar's Minister for Relief and Resettlement, said in Rangoon yesterday. "They did not have anywhere to flee."
In the town of Bogalay in the delta region, 95 per cent of the houses were destroyed, he said.
The first trickle of relief supplies was beginning to reach some survivors yesterday, but Myanmar's military regime was still limiting the flow of food supplies and relief workers to the long-isolated country.
The regime is forcing all foreign relief workers to apply for entry visas,aprocess that can take several days. Some UN aid workers, who had wanted to go to Myanmar three days ago, will not be able to enter the devastated country until tomorrow because of delays in issuing them visas.
Other aid workers were still awaiting visas without any indication of when they will get them. The regime said the aid workers would have to "negotiate" for access to the country.
"It's beenavery difficult process to get the government to accept offers of international assistance," Mr. Risley said.
U.S. President George W. Bush urged the military regime to allow U.S. experts to assess the extent of the disaster. Two U.S. Navy ships, loaded with relief supplies foranearby disaster-relief exercise, were heading toward Myanmar yesterday, without any assurance that they will be allowed to distribute their supplies.
"We're prepared to move U.S. Navy assets to help find those who've lost their lives, to help find the missing, to help stabilize the situation," Mr. Bush said. "But in order to do so, the military junta must allow our disaster-assessment teams into the country."
Myanmar's military junta prefers to receive bilateral aid from donor countries, which allows the regime to control its distribution. Thailand and India have already sent shipments of relief supplies to Myanmar, but the UN warned that those shipments are unco-ordinated. "The UN is very concerned that this will lead toahaphazard response," Mr. Risley said. "There is an urgent need for co-ordination."
The French government also complained about Myanmar's attempts to win control of the aid distribution. "The United Nations is asking the Burmese government to open its doors," French Foreign Minister Bernard Kouchner told parliament. "The Burmese government replies, 'Give us money, we'll distribute it.' We can't accept that."
Tin Maung Htoo, executive director of Canadian Friends of Burma, said it's wishful thinking to expect that the Myanmar regime will shift to more democratic ways asaresult of allowing foreigners to assist the country.
"This time we should focus on the relief effort first, but in return, I think, I'm hoping that the military will realize that these international people have good intentions," Mr. Htoo said.
Not everyone was discouraged. Ramesh Shrestha, the Unicef representative in Myanmar, said the biggest problem facing relief efforts isalogistical one.
"The whole area is flooded," he said. "Lots of bridges have collapsed. Hundreds of trees have fallen and are blocking the highways. The military is helping to clear the road and airlifting their supplies."
Unicef Canada announced yesterday it has launched an emergency appeal for funding to assist cyclone victims.
Mr. Shrestha was visiting family in Canada when the cyclone hit but spoke with workers in Myanmar, who relayed stories to him about contaminated wells, serious damage to crops and blocked seaports.
"Our office hadameeting with the Foreign Ministry and we were assured there would be free access to the UN and the international staff for movement and distribution of supplies, and we have been assured the same for visas; once [relief workers] apply for the visa, it will be granted."
The World Food Program, with the help ofaDutch relief agency, distributed 30 tonnes of food from its local warehouse to homeless survivors at feeding centres in Rangoon yesterday. It is aiming to send another 26 tonnes of food to Myanmar in two flights from Thailand today. Butafull-scale airlift or "air bridge"
will be needed, as it was during the tsunami that devastated much of Southeast Asia in 2004, Mr. Risley said.
The 30 tonnes of aid delivered yesterday isasmall amount, barely enough for 2,000 people to be fed for several weeks, he said.
Assessment teams inatownship near Rangoon found that 27,000 homeless survivors were living in 42 shelters, including schools and monasteries, Mr. Risley said. Only 10 of the 42 shelters had any food or water. "The health situation in those shelters is reported to be deteriorating."
In another district withapopulation of 140,000, about 40,000 are missing in the cyclone's wake, he said. "This is an extreme crisis. If these numbers hold up in other places, the death toll will likely continue to rise."
According to the Canadian Friends of Burma, 3,000 to 4,000 Myanmarese expatriates moved to Canada since the pro-democratic uprisings in 1988. Many of those people who have relatives living in the Irrawaddy delta have been trying anxiously to reach them with no luck. Land lines and cellular contact have been disrupted since the cyclone hit last Friday.
Timothy Zaw Zaw,a39-year-old who lives in Mississauga, has been trying to reach his mother and two sisters in Rangoon. He also has relatives in Singapore, India and Thailand trying to get through.
"I'm concerned for their safety," he said. "I'm trying to contact them as much as possible."
In an e-mail to family members, Canadian Andrew Kirkwood, the Myanmar program director for Save the Children, wrote that "there is no power in the city (and therefore no running water) and won't be foramonth."
"As you've probably seen on the news, the scale of the devastation here is unimaginable. We estimate 50,000 dead and millions homeless. We're going to be mountingahuge logistics operation for at leastayear - we're all going to be working flat out for the foreseeable future."
Dave Toycen, president and CEO of World Vision Canada, said 580 relief workers from his organization are in the process of providing bottled water, tents, tarpaulins, clothing and emergency medicines to affected areas.
"I think it'sagood news/bad news story," he said. "The good news is, we've got almost 600 staff on ground doing basic relief work. The bad news is, the numbers keep going up and it still appears the aid is simply not moving in fast enough."
တင်ပြသူ Canada Myanmar Group at 4:34 p.m. No comments: Links to this post
ကနေဒါနိုင်ငံထဲ မှ... Links များ
ကနေဒါနိုင်ငံ အတွင်းရှိ မြန်မာ အသိုင်း အ၀ိုင်း အဆက် အသွယ် များ မြန်မာတိုင်းရင်း သား များ ၊ ဘာသာရေး ၊ လူမှု ရေး ၊နိုင်ငံရေး အဆက်အ သွယ်များ ကို တင် ပြစုစည်း ပေးထား ချင်း ဖြစ်ပါ သည် ၊ မိမိတို့ ကြိုက် နှစ်သက် ရာ များကို အသေးစိပ် ၀င်ရောက် လေ့ လာနိုင်ပါ သည် ၊ အထူး သဖြင့် ကနေဒါ နိုင်ငံ ပြင် ပမှ လေ့ လာ လိုသူ များ အတွက် ရည် ရွယ် ပါ သည် ။ပြည့် စုံ ခြင်း မရှိ သေးပါ ဆက်လက်၍ ဖြည့် စွက် တင် ပြသွားပါ မည် ၊
http://yeyintnge.blogspot.com ( ကို ရဲရင့် - ကနေဒါ )
http://ayeyarthar.multiply.com/ ( အေးရိပ်သာ)
http://bsdo.blogspot.com ( မြန်မာကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ် အဖွဲ့ )
http://www.bsacanada.org ( မြန်နိုင်ငံကျောင်းသားများအသင်း - ကနေဒါ )
( ကရင် ကွန်မြူနတီ ကနေဒါ )
http://www.moncanada.org ( မွန် ကနေဒီယန် အဖွဲ့ )
http://eng.chro.org ( Chin Human Rights Organization )
http://www.motherhomecuisine.com ( အမေ့ အိမ် စားသောက်ဆိုင် )
http://www.ainchannmyay.blogspot.com ( အိမ့် ချမ်းမြေ - ကနေဒါ )
http://www.cfob.org ( Canadian Friends of Burma )
Toronto Burma Round Table.
Vancouver Burma Roundtable
Maha Dhammika Temple
Contact: Ashin, (416) 747-7879
Contact: Chair Person: Kyaw Zaw Wai: zaw.w.kyaw@gmail.com
Burmese Chinese Association of Ontario
35 Huron Street
မြန်မာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများ
Maha Dhammika Kyaung Monastery,
( Ven. U Nandavamsa ) Mahadhammika Buddhist Vihara
Toronto, Ont. M9L 2Z2
Resident director and teacher: Ven. Ashin Kawwida; Theravada, Abhidharma
မြန်မာ ခရစ် ယန် အသင်း တော် များ
http://bcccsv.org/community.php ( Burmese Christian Community Church )
http://www.bcfcs.org/index.cfm?page=4 (Burmese Christian Fellowship Church )
( မြန်မာ သံ ရုံး များ )
Steve, Kyaw Aung LL.B
Certified Canadian Immigration Law Consultant
800-675 W Hastings St.
Phone : +1 (604) 630-2912
Email : steve@immisolve.com
Web Site: www.immisolve.com
အခြားသော links များ Web site များ ရပါ ကလည်း ထပ် မံ ရှာဖွေ
ဖြည့် စွက်ပေးပါ မည် ။ မိမိတို့ ၏ links လိပ်စာ အသစ်များ ကို လည်း
canadamyanmar@gmail.com သို့ ပေးပို ကြစေလိုပါ သည် ။
တင်ပြသူ Canada Myanmar at 3:44 p.m. No comments: Links to this post
ကနေဒါနိုင်ငံ ထဲမှာ ၀င်ငွေ တိုင်းနှင့် ပြည်နယ်အလိုက်
ကနေဒါနိုင်ငံ ထဲ မှာ ....
ကနေဒါ နိုင်ငံတွင် လူဦးရေ ၃၃ သန်း ကျော် ရှိ ပြီးအသက် ၁၄ နှစ် အောက် မှာ ၁၆.၃ % ၊အသက် ၁၅ နှစ် မှ ၆၄ အထိ ၆၈.၈ % နှင့် ၆၅ နှစ် ကျော် ၁၄.၉ % ရှိသည် ဟုသိရသည် ။အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးအချီုးမှာ ၁.၀၂ င်္ကျားး၁ မ ရှိသည် မြန်မာနိုင်ငံသား လူဦးရေ ၄၀၀၀ ခန့် ရှိမည် ဟု Ethnic groups in Canada အဖွဲ့ ၏စစ်တမ်းများအရသိရပြီး မြန်မာ့ အရေးနှင့်ပတ်
သက်သော ကနေဒါ နိုင်ငံအခြေစိုက် NGOs များအဆိုအရ
ထိုထက်ပိုနိုင်သည် ဟုဆိုသည်မြန်မာနိုင်ငံသားအများစုမှာ တိုရွန်တို ၊ ဗန်ကူးဗား ၊အော်တာဝါ၊ မွန်ထရီရယ် စသည့်မြို့ ကြီးများတွင်နေထိုင်ကြ သည် ။ ကနေဒါနိုင်ငံ ၏ အကျယ်အ၀န်း မှာ ဧရီယာစတုရန်းမိုင်ပေါင်း
၉ ၉၈၄ ၆၇၀ စကွဲယားမိုင်ကျယ်ဝန်းသည် ။
ပြန်းပြ၀င်ငွေများကိုလည်းဇယားဖြင့် ပြထားပါသည်...ပြည်နယ်အလိုက်၊ လုပ်သက်အလိုက်၊ ကွာခြားပါသည်၊
Retail Sales / Sales Clerk
Computer Engineer (not software)
သည် ထင် သည့် ချက်အလက်များကို လက်လှမ်းမှိသမျှ အတို ချုံး ဆက်လက်တင်ပြသွားမည် ဖြစ်ပြီးအသေးစိပ်သိလိုပါ ကထိုမူလ၀က်ဆိုက်များတွင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင် တိုက်ရိုက်လေ့ 
လာနိုင်သည် ။ ထို လင့် များ ကို လည်းဆက်လက်ဖေါ်ပြပေးသွား ပါမည် အခြား ပညာရေး ၊လူမှူရေး၊ နိုင်ငံရေး နှင့် Immigration ဆိုင်ရာ များကိုလည်း အလျှင်းသင့် သလို ဖေါ်ပြ ပေး
သွားပါမည် ။ အသေးစိပ်လေ့ လာ လို ပါကကနေဒါ မှ နိုင်ငံတွင်းမှ ဘလောက် များ နှင့် အခြား ကနေဒါ မှ ၀က်
ဆိုက် များကိုလည်း သိကောင်းစရာ ကနေဒါမှာ ခေါင်းစဉ်အောက် တွင် ဖေါ်ပြပေးသွားပါ မည် ။ ထိုအပြင် အခြား ကနေဒါ အစိုးရ တရားဝင် ၀က်ဆိုက်များ မှ ကောက်နုပ်ချက်များကို
လည်းဆက်လက်ဖေါ် ပြပေးသွားပါမည် ......
တင်ပြသူ Canada Myanmar at 9:59 a.m. No comments: Links to this post
Daw Suu and Time Magazine
Suu Kyi among 100 Most Influential People
: Time magazine
The Burmese pro-democracy icon, Aung San Suu Kyi, has been listed by Time magazine as among the 100 most influential people of the world for the year 2008.
Aung San Suu Kyi, who has spent nearly 12 years under house arrest, was amongagroup of people including the Tibetan spiritual leader, the Dalai Lama; former Malaysian Deputy Prime Minister Anwar Ibrahim; Chinese President Hu Jintao; Russian President Vladimir Putin; and India leader Sonia Gandhi in the magazine's list of 100 most influential people of the world.
Aung San Suu Kyi, nonviolent activist and winner of the 1991 Nobel Peace Prize, reads in her yard where she was under house arrest. (Photo: Steve McCurry/Magnum Photos)
The US President, George W Bush, madeacomeback to the list and the three US presidential candidates, Hillary Clinton, Barack Obama and John McCain are included on the list, which does not include Osama bin Laden, the most wanted terrorist in the world; the Iranian President, Mahmoud Ahmadinejad; and the UN Secretary-General, Ban Ki-moon.
Writing about Aung San Suu Kyi in the special issue, Oscar-winning actress Anjelica Houston described her as "today's Mandela."
"Suu Kyi, 62, has beenacourageous advocate for human rights and democracy, and she is the world's only imprisoned Nobel Peace Prize recipient," wrote Houston, who has also been involved with the US Campaign for Burma.
Terming the current regime as extremely brutal, Houston said: "It took decades for us to come to Mandela's aid. Suu Kyi—and the people of Burma—are waiting to be freed now."
တင်ပြသူ Canada Myanmar at 9:33 a.m. No comments: Links to this post
ကနေဒါနိုင်ငံ ထဲမှာ ၀င်ငွေ တိုင်းနှင့် ပြည်နယ်အလိုက...
နာဂစ် မုန်တိုင်း နှင့် မြန်မာ ပြည် Toronto, The Gl...